Sary fandravahana amin’ny boky fianarana japoney tsy niniana hampihomehy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2015 8:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Català, عربي, English
Pikantsary avy amin'ny mpisera YouTube hahaha douga
Manerantany dia vitan'ny mpianatra ny mamadika ireo boky fianarana, sariohatry ny tsy maintsy andehanana any an-tsekoly na dia mankaleo be aza, ho zavatra lasa fanalan'andro. Tsy mivaona amin'izany i Japana.
Tao amin'ny boky fianarana tany amin'ny trano fiterahana iray ity iray ity. Mampitolagaga tanteraka!
Tao amin'ny tranonkalan'ny Matome Naver, nalain'ny mpiserasera hivoaka ao ireo sary fandravahana avy amin'ny boky fianarana isan-karazany izay ahitana ireo sary nampihomehy tsy niniana ka hatramin'ireo natao hihomehezana sy mampitolagaga tanteraka.
Mazava fa natao horaisina amim-pahamatorana izy ireo amin'ny maha-boky fianarana azy, saingy nihiratra ny fiarahamonina an-tserasera Matome Naver tamin'ny fanaporofoana ny maha-tsy tokony eo amin'ny toerany ireo fandravahana an-tsary ny boky fianarana.
Tsy vao ela akory izay no nanokafako ny bokiko fianarana raha nahita voalohany aho hoe ahoana ireo zatovolahy valo ireo.
Ny sary fandravahana sasantsasany dia toa natao hitovy amin'ireo olomalaza manerantany:
Rehefa niresaka [sary fandravahana mampihomehy amin'ny boky fianarana] izahay dia hitako tao amin'ny lesona teny anglisy androany ity iray ity: Luciano Pavarotti. Toa mametraka izy ity hoe mpihira manao ahoana izy!
Ny hafa kosa mahita ny fitoviana amin'ireo olo-malazan'ny boky sy sarimiaina manga:
Ny hany eritreretiko rehefa mijery ilay fandravahana an-tsary amin'ny boky fianarana aho dia Shingeki no Kyojin [Fanafihana ny Titan].
Malaza dia malaza ao amin'ny Matome Naver ilay sary fandravahana amin'ny boky fianarana, izay efa nahazo jery 700.000 hatramin'izao ary mihoatra ny 900 ireo mpisera ni-‘favori’ azy.
Mpisera amayasa ao amin'ny Matome Naver, mpanorina ny randram-baovao, no namehy ny fiantraikan'ny fandravahana an-tsary amin'ny boky fianarana:
Noho ireo sary fandravahana ireo dia tsy afa-mifantoka amin'ny fianarana ataoko aho, haha.
Tsy vahiny amin'ny mampalaza an-tserasera ireo sary fandravahana boky fianarana ireo i Japana.
Tamin'ny voalohandohan'ny volana jona, ny mpamoaka boky Sanseido KK dia nisintona teny amin'ny fivarotam-boky indray boky fianarana miisa 10,000 rehefa nahita tamin'ny kisarisarim-pandravahana zazavavy manana tanana telo (mitehina eo amin'ny latabatra ny tanana fahatelo raha mamihina harona amin'ny tanany roa). Namoaka fialan-tsiny ampahibemaso ny mpamoaka boky rehefa hitan'ny ankizy ilay fahadisoana:
Kisarisary fandravahana nanondrana! boky fianarana 10.000 nosintonina teny amin'ny fivarotamboky! Fa maninona ny mpamoaka no tsy maintsy naka ny boky tsirairay sy nanitsy ny fahadisoana? Iza no mahalala?
Ankoatra izany, ny tranonkalan-dalao videô Kotaku dia nitatitra ny fikasan'ny mpianatra tamin'ny herintaona hanao ireo fandravahana amin'ny boky fianarana ho mahaliana kokoa amin'ny alalan'ireo doodle [sary fandraisana eo amin'ny vavahadin-tserasera]. Ireo kisarisary fandravahana ireo dia ahitana karazan-javatra miainga amin'ny fanomezam-boninahitra ka hatramin'ireo kisarisary sahisahy loatra manahirana jerena any am-piaana na ao an-dakilasy.
Kisary fandraisana eo amin'ny vavahadin-tserasera amin'ny endrika “La guerre des etoiles” [Adin'ny kintana]
Na dia ireo boky fianarana natao ho an'ny mpianatra ivelan'i Japan aza, indrindra ny boky fianarana teny japoney, dia ahitana hatsikana tsy niniana.
[Sary fandravahana manazava ny voambolana japoney chikan (manao an-ditra mamihina) sy ny matoateny sawaru (mahatsapa).]
Hita tao amin'ny boky fianarana japoney. Fa maninona no lehilahy antitra sy zatovolahy, lasan'eritreritra aho…
22 ora izayHong Kong (Shina)